ओलीले भने : बाध जिस्क्याए बिरालोको हालत के होला ? – YesKathmandu.com
ओलीले भने : बाध जिस्क्याए बिरालोको हालत के होला ?
आइतबार ११, माघ २०७१
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीले ज्यादती गरे त्यसको प्रतिवाद गर्न सभासद र कार्यकर्तालाई निर्दशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले संविधान बन्न नदिन माओवादीले गरेको हर्कतका वारेमा जनतालाई जानकारी गराउन जिल्लामा जान सभासद्लाई ५ देखि १० दिनको छुट्टि दिएका छन् ।
सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाडले संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति गठन गरेपछि एमालेले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले समितिमा भएका सभासदलाई पाँच दिन र समितिमा नभएकालाई दश दिनको बिदा दिएका हुन् ।
‘माओवादीले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उप्पीडित समुदायलाई एमालेबिरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने आशंकामा उनले जिल्ला जान निर्देशन दिएका हुन् । उनले एमाओवादीले शिर्जना गरेको भ्रमलाई प्रतिवाद गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।
‘अहिले बाघलाई बिरालोले जिस्काएजस्तो भइरहेको छ, नजिस्काउ, साँच्चिकै प्रतिवाद गर्नुपरेमा निकै महँगो पर्नेछ ’ ओलीले सप्तरीमा एमाले पार्टी कार्यालयमा भएको आगजनीलाई संकेत गर्दै भने ।
‘ब्यारेक कब्जा गरि सेना मार्ने ब्यक्ति हुँ म, जावो केपी ओली’
नेपाल डिभिजन १ मा !
सर्वाेच्चले माग्यो च्यातिएका मतपत्र र मतपत्र च्यात्ने माओवादी कार्यकर्ताको मुद्दा फाइल
तराईको आगो निभाउन हिड्यो युवा संघको दस्ता
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले यसरी नचाए गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई
प्रचण्डले बोलाए अख्तियारका सबै आयुक्तहरुलाई
विराटनगर कोइराला निवासबाट डा. शेखरले भनेः देउवाजीले तत्काल सरकार छोड्नुपर्छ
राजश्व महानिर्देशक शर्माले मदिरा कम्पनीलाई ९७ प्रतिसत कर छुट दिएको तथ्य फेला